လက်ကားနဲ့ LED အလင်းပြန်မှုအလင်း-လူမီနီယမ်ထုတ်လုပ်သူများနှင့် Pricelist | Ristar
လူမီနီယမ် 40W အလင်းပြန်မှုအလင်း Features: 1.Use High-grade ကိုလူမီနီယံ, စုံလင်သောအပူစီးကူးခြင်းနှင့်အပူဓါတ်ရောင်ခြည်။ 2.High အရည်အသွေးကိုသံမဏိဗုံးစ, ကောင်းသောပုံသေအကျိုးသက်ရောက်။ 3.High အလင်းထုတ်လွှတ်နိုင်စွမ်း, တောက်ပ၏ကောင်းသောတူညီနေမှု။ 4.Dustproof နှင့်ကောင်းမွန်သော Anti-မြူစွမ်းဆောင်ရည်။ branded 5.High အရည်အသွေးကိုတောက်ပမြင့်မားသောချစ်ပ်, LED ။ 6.Simple installation ကိုအမျိုးမျိုးတပ်ဆင်နည်းလမ်း: 1) ဝါယာကြိုးတပ်ဆင်2ဆှဲ) ဟာ့ဒ်ဝဲဗုံးစ 3) Group က installation ကို အသုံးပြု. တပ်ဆင်ခြင်း။ တဦးတည်း conne ဖွငျ့တစျဦးက ...
လူမီနီယမ် 40W အလင်းပြန်မှုအလင်း Features:
1.Use High-grade ကိုလူမီနီယံ, စုံလင်သောအပူစီးကူးခြင်းနှင့်အပူဓါတ်ရောင်ခြည်။
2.High အရည်အသွေးကိုသံမဏိဗုံးစ, ကောင်းသောပုံသေအကျိုးသက်ရောက်။
3.High အလင်းထုတ်လွှတ်နိုင်စွမ်း, တောက်ပ၏ကောင်းသောတူညီနေမှု။
4.Dustproof နှင့်ကောင်းမွန်သော Anti-မြူစွမ်းဆောင်ရည်။
branded 5.High အရည်အသွေးကိုတောက်ပမြင့်မားသောချစ်ပ်, LED ။
6.Simple installation ကိုအမျိုးမျိုးတပ်ဆင်နည်းလမ်း:
2) Hardware ကိုဗုံးစ အသုံးပြု. တပ်ဆင်ခြင်း
3) အုပ်စုတပ်ဆင်ခ။ မည်သည့်သော graphical ပုံစံဒီဇိုင်းကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့ချိတ်ဆက်တဦးတည်းအားဖြင့်တဦးတည်း။
ယခင်: LED ကိုရေလွှမ်းမိုးအလင်း-RS PJ ပေါင်း 100 SMD
နောက်တစ်ခု: LED အလင်းပြန်မှုအလင်း-သံ
ချောင်း Lighting ကရိယာ
Led နေရောင်ခြည် Rechargeable ရေလွှမ်းမိုးအလင်း, ဦးဆောင် COB ရေလွှမ်းမိုးအလင်း, Philips က 3030 Led ရေလွှမ်းမိုးအလင်း, Ceiling Led Panel Light , Tri-Proof Light Lighttip , Led Floodlight 30w ,